Ny ataon’ny tena ihany no mahavoa… | NewsMada
Ny ataon’ny tena ihany no mahavoa…
Par Taratra sur 23/06/2020
Mbola momba ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ihany izao. Nahoana? Vao mainka mafimafy sy sarotsarotra no ho ny teo aloha izay iainana: mitombo, saika isan’andro, ohatra, ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Coronavirus. Raha tany Toamasina no tena nampirongatra izany talohaloha teo, Antananarivo indray izao. Saika nafantoka tany Toamasina avokoa ny ezaka?
Lasa alasafay na tsy nisy firy, ohatra, ny fanaraha-maso amin’ny fampanajana ny fepetra teto Antananarivo, raha nampikoropaka sy nanaovana bemidina ny tany Toamasina. Vokany, Antananarivo indray izao no mampirongatra ny tsimokaretina etsy sy eroa. Tsy vitan’izany, ao anatin’ny fotoana mangatsiaka rahateo izao. Mahazo vahana ho azy amin’izany ny tsimokaretina: ela velona, mitombo haingana…
Sanatria, ho sasatry ny miarina amin’izany ve? Na mila fanaraha-maso akaiky sy hentitra ary mitohy vao hahalala hiaro tena sy hiaro ny hafa amin’ny fanajana antsipiriany sy manontolo ireo fepetra… Izay tsy mahafehy tena no mila fehezina, izay tsy manara-dalàna no mila ampanarahana lalàna, izay tsy mety fay noho ny ataony no mila faizina sy sazina… Mbola mijanona amin’izany ihany ve hatramin’izao?
Ahoana ny hahazoana miarina amin’ny fiainana, raha tsy mahafehy tena hisorohana ny valanaretina? Na manara-dalàna ihany amin’izany fa am-boalohany ihany. Ratsy fiafara hatrany fa tsy inona. Tsy mahafa-bela ny aretina; ny fivelomana, tsy azo ivalamparana. Noho ny tsy fananana faharetana ny antony, na ny fahamehana tsy ara-pahasalamana loatra fa ara-pitadiavana… tena mahamaika sy hoe zava-dehibe.
Amin’izao sisa izao, raha mihamitombo ny tranga vaovao amin’ny fitondrana tsimokaretina: mila manana fahasahiana amin’ny fifanaraha-maso sy fifampitenenana amin’izay? Tsy izay tsy fitandremana afitsoky ny vitsivitsy no hitera-doza lehibe ho an’ny maro. Mba samy ho tena tomponandraikitra amin’ny ataony ny tsirairay. Ny ataon’ny tena ihany no mahasoa na maharatsy, handresena ny valanaretina na tsia.